Lisa ဟာ “Queen Of Duality” ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနေတဲ့ “Youth With You 3” မှ ဓာတ်ပုံများ | News Bar Myanmar
Lisa ဟာ “Queen Of Duality” ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနေတဲ့ “Youth With You 3” မှ ဓာတ်ပုံများ
Lisa ဟာ iQIYI ရဲ့ “Youth With You 3” မှာ အကနည်းပြအဖြစ်ထပ်မံပါဝင်မဲ့အကြောင်းကို အားလုံးလည်းသိထားကြမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဥ်တုန်းက Lisa ရဲ့ သင်ပြမှုတွေဟာ လူပြောများခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အကြိုက်တွေ့ကာ အာရုံစိုက်မှုအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ယခုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Season3မှာလည်း အကနည်းပြအဖြစ်ထပ်မံပါဝင်လာတဲ့ Lisa ကို အများက စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ Lisa လေးကတော့ သူမရဲ့အကစွမ်းရည်နဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းပါရမီတွေကြောင့် လူကြိုက်များကြပါတယ်။
iQIYI ကနေထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာဆိုရင် Lisa ဟာ “Queen of Duality” ဆိုတဲ့အတိုင်း မတူညီတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ကြောင်းကို အထင်းသား​မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ပုံတွေထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း အံ့သြမှင်သက်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသလိုပဲ နောက်တစ်ပုံမှာတော့ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးအသွင်ကို ပရိသတ်ကြီးတို့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လူတစ်ယောက်တည်းက အသွင်မတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာ Lisa လေးကိုပြောနေသလိုပါပဲနော်။ Youth With You3ကတော့ February 18 နေ့မှာ စတင်ပြသနေပြီဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါမှာကော Lisa လေးက ဘယ်လိုမျိုးတွေစည်းစနစ်တကျသင်ကြားပေးဦးမလဲ? မနှစ်ကလိုပဲ ပြိုင်ပွဲဝင်​တွေကို ဆရာကျကျဦးဆောင်ဦးမှာလား? စသဖြင့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ရနေပါပြီ။
Next ပေးထားခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်း ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်ခဲ့တဲ့ GOT7 အဖွဲ့ »
Previous « BTS အဖွဲ့အတွက်ကျင်းပတဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေဟာ အရင်ကနဲ့မတူတော့တဲ့အကြောင်း J-Hope ပြောပြခဲ့...